Wasaaradda Duulista iyo Hawada Somaliland Oo Sheegtay In Shirkadda Ethopian Airline Ay Masuul Ka Tahay Dhibaatooyinka Dadweynaha Ka Haysta Duulimaadyadii Ay Baajisay, | Salaan Media
Wasaaradda Duulista iyo Hawada Somaliland Oo Sheegtay In Shirkadda Ethopian Airline Ay Masuul Ka Tahay Dhibaatooyinka Dadweynaha Ka Haysta Duulimaadyadii Ay Baajisay,
Sep 10,2013 Hargaysa(SM) Waxaanu qoraalkan ku Cadaynaynaa in Diyaaradda Ethopian Airline ay Masuul ka tahay dhibaatada soo gaadhay dadka rakaabka”“Xukuumaddu marnaba aqbali mayso in la dhibaateeyo dadka dhoofayaasha ah waana masuuliyadda ay u igman tahay Wasaarada Duulista”“Arrintan Diyaaradda Ethopian Airline waxa Lagu dhamayn doonaa Heer dublamaasiyadeed”Wasaaradda Duulista hawadda Somaliland ayaa shirkadda Ethopian Airline ku eedeysay inay baajisay duulimaadyadii ay ku iman jirtay Somaliland iyadoo dad badan oo rakaab ahi sugayaan.
Wasaaraddu waxay sheegtay in shirkadda Ethopian Airline ay masuul ka tahay dhibaatooyinka dadweynaha ka haysta, sidaasna waxa lagu sheegay war-saxaafadeed uu soo saaray madaxa baratakoolka wasaaradda Duulista Hawadda iyo Gaadiidka Cirka Cabdilaahi Axmed Caarshe.
War-saxaafadeedkaasina waxa uu u dhignaa sidan:- “Diyaaradda Ethiopian Airline waxay hakisay duulimaadyadeedii Hargeysa, iyada oo aan cadayn sababta ay u baajisay duulimaadyadeeda, sida aynu wada ognahay Somaliland waxaa ka jirta nabadgelyo buuxda oo aan ka jirin wadamo badan oo ku yaalla geeska iyo kuwa caalamkaba, nabada Somaliland ka jirta ayaa ah mid cid waliba isku halayn karto taasi oo aan marnaba shaki iyo mad-madaw geli-karin.
Hadaba, waxaanu qoraalkan ku cadaynaynaa in diyaaradda Ethiopian Airline ay masuul ka tahay dhibaatada soo gaadhay dadka rakaabka, waxaana laga rabaa diyaaradda Ethiopian Airline in ay si deg deg ah u xaliso dhibaatada dadka rakaabka ah haysata, ayna bilaabaan qaabkii ay dadkaa u gaadhsiin lahaayeen wadamadii ay ka yimaadeen annaga oo og in ay durba bilaabeen dhoofinta dadka rakaabka ah.
Xukuumaddu marnaba aqbali mayso in la dhibaateeyo dadka dhoofayaasha ah waana masuuliyadda ay u igman tahay Wasaarada Duulista oo qaranka uga wakiil Madaarrada iyo arrimaha duulimaadyada oo dhan, arrintan eedeedana waxaa iska leh Ethiopian Airline oo ah diyaarad ganacsi Somalilandna ka hesha faa’iido aad u badan mana jirto ammaan xumo ka jirta Somaliland.
Xukuumadda Somaliland waxay masuul ka tahay ilaalinta ammaanka madaarrada iyo guud ahaanba dalka oo dhan, diyaaradaha ganacsigana waxaa laga rabaa in ay ixtiraamaan qaranimadda, madax bannaanida iyo ammaanka ka jira Somaliland.
Arrintan diyaarada Ethiopian Airline waxaa dalka Itoobiya u tegey wefti ka socda xukuumadda Somaliland uu hoggaaminayo Wasiirka Wasaarada Arrimaha Gudaha Md. Cali Maxamed Waran-cade uuna ka mid yahay Wasiirka Wasaarada Duulista Hawada Somaliland Md. Maxamuud Xaaashi Cabdi, waxaana arrintan lagu dhamayn doonaa heer Diplamaasideed si loo sii xoojiyo xidhiidhka ka dhexeeya labada dalka ee Somaliland iyo dawladda Itoobiya ee aynu jaarka nahay.
Waxaa kale oo aanu beeninaynaa wararka sheegayey in Wasaarada Duulistu ay dadka u xaniban diyaarada Ethiopian Airline ay u diidey in ay Berbera ka dhoofaan warkaas oo ah mid aan jirin.
Madaarada Somaliland ay yihiin kuwo ammaan ah dhibaato yar oo keliyana aanay ka dhicin, waqtigan xaadirka ahna ay diyaarada waaweyni ay si weyn u isticmaalayaan labada madaarba ee Igal International Airport Iyo Berbera Airport.
Warbaahinta waxaan kula talinayaa in ay si cad u sheegaan nabadgelyada Somaliland ka jirta oo ah mid ummadda oo dhan dani ugu jirto, danta gaarka ahna ay ka hormariyaan ta guud iyo masaaliixda qarankanka Somaliland.”